२५ लाखमा कुमारित्व (भर्जिनिटी) बिक्रिमा ! अनलाईन विज्ञापन राखिन् «
२५ लाखमा कुमारित्व (भर्जिनिटी) बिक्रिमा ! अनलाईन विज्ञापन राखिन्
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७५, बिहीबार १३:१४
एजेन्सी । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा बस्ने एक किशोरीले कथित रुपमा आफ्नो कुमारित्व (भर्जिनिटी) बिक्रीमा रहेको विज्ञापन गरेकी छन् । ‘भर्जिन सिक्स यू, सिड्नी सिटी’ शीर्षकमा ती युवतीले लोकान्टो साइटमा विज्ञापन प्रकाशित गरेकी हुन् । प्रकाशित विज्ञापनका अनुसार १९ सालकी ती किशोरीले भर्जिनिजी बेच्नका लागि २५ लाख अमेरिकी डलर (२ करोड ५७ लाख नेपाली रुपैयाँ) मूल्य तोकेकी छन् ।आरटी न्यूजका अनुसार यी युवतीले लेखेकी छन्, ‘म १९ वर्षकी केटी हुँ ।
कोही मेरो भर्जिनिटी खरिद गर्न चहान्छ ?’ यो विज्ञापनमा ती युवतीले धेरै सर्तहरु पनि तोकेकी छन् । उनले भनेकी छन्, भर्जिनिटी खरिदका लागि एक रेस्टुरेन्टमा डिनरसँगै कुराकानी सुरु गर्नुपर्ने छ । र जति पनि पैसा हो त्यो सबै एकैसाथ दिनु पर्नेछ । विज्ञापनमा उल्लेख गरिएअनुसार उनीसँगको संभोगका बेला कण्डम प्रयोग गर्नु पर्नेछ । र सेक्स गर्ने बेला कुनै पनि अन्य यौन हिंसा गर्न पाइने छैन । उक्त पलको भिडियो पनि रेकर्डन गर्न नपाइने उनको सर्त छ ।
यद्यपि उनले ग्राहकले रोजेको होटेलमा आउन आफू तयार रहेको बताएकी छन् । केटीले यो पनि लेखेकी छन् कि इच्छुक व्यक्तिले आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्न सक्छन्, उनी त्यसको जवाफ दिन तयार छिन् । यस्तो प्रकारको यो पहिलो घटना भने हैन । यो भन्दा पहिला रोमानियाकी एक युवतीले पनि २० लाख पाउण्डमा हङकङका एक व्यवसायीसँग यस्तो डिल गरेकी थिइन् । तस्विर : मोडल फतिमा बानु
बलिउडमा डेब्यु गर्दै कलाकार डेनीका छोरा
नेपाली मूलका भारतीय अभिनेता डेनी डेङजोपाका छोरा रिनजिङ डेङजोपा बलिउडमा डेब्यु गर्ने भएका छन् ।
दोस्रो ‘एनटिएस कौसी क्विन–२०७८’ को उपाधि राधा ढकाललाई
दोस्रो ‘एनटिएस कौसी क्विन–२०७८’ को उपाधि ललितपुरकी राधा ढकालले जितेकी छन् । प्रज्ञान क्रियशन प्रालिद्धारा
आफ्ना बुबा वि’रुद्धको कानुनी ल’डाइँ जिते सगै ब्रिट्नी १३ वर्षअघिको अवस्थामा पुगिन
गायिका ब्रिटनी स्पियर्स बुवाको कानुनी अभिभावकत्वबाट मुक्त भएकी छन्। लस एन्जल्स अदालतले ब्रिट्नीमाथि उनका बुवा